Atemmufo 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Kaananfo hene Yabin teetee Israelfo (1-3)
Odiyifobea Debora ne Ɔtemmufo Barak (4-16)
Yael kum ɔsahene Sisera (17-24)
4 Nanso bere a Ehud wui no, Israelfo no san yɛɛ bɔne wɔ Yehowa ani so bio.+ 2 Enti Yehowa tɔn wɔn maa Kaanan hene Yabin+ a na odi hene wɔ Hasor no. Ná ne sahene ne Sisera a na ɔte Haroset-Hagoyim*+ no. 3 Na Israelfo su frɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa wɔn,+ efisɛ na Yabin wɔ* ɔko nteaseɛnam 900 a sekan tuatua ho,*+ na ɔde Israelfo no faa ateetee mu*+ mfe 20. 4 Saa bere no, Lapidot yere Debora a ɔyɛ odiyifobea+ no na na obu atɛn* wɔ Israel. 5 Ná Debora taa tena n’abedua* ase wɔ Rama+ ne Betel+ ntam wɔ Efraim mmepɔw so, na na Israelfo no foro kɔ ne nkyɛn kotie atemmu. 6 Ɔsoma kɔɔ Kedes-Naftali+ kɔfrɛɛ Abinoam ba Barak+ bae, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Israel Nyankopɔn Yehowa aka sɛ: ‘Kɔ, nantew kɔ* Tabor Bepɔw so. Worekɔ a, fa mmarima 10,000 fi Naftalifo ne Sebulonfo mu ka wo ho kɔ. 7 Na mede Yabin sahene Sisera ne ne ko nteaseɛnam ne n’asraafo bɛbrɛ wo wɔ Kison nsu*+ no ho, na mede no bɛhyɛ wo nsa.’”+ 8 Ɛnna Barak ka kyerɛɛ Debora sɛ: “Sɛ wo ne me bɛkɔ a, ɛnde mɛkɔ, na sɛ wo ne me ankɔ a, me nso merenkɔ.” 9 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ de, me ne wo bɛkɔ. Nanso ɔko a worekɔ no remma wunnya anuonyam, efisɛ ɔbea na Yehowa de Sisera bɛhyɛ ne nsa.”+ Afei Debora sɔree, na ɔne Barak kɔɔ Kedes.+ 10 Barak boaboaa Sebulonfo ne Naftalifo+ ano baa Kedes, na mmarima 10,000 dii n’akyi. Debora nso kaa ne ho foro kɔɔ bi. 11 Saa bere no, na Kenini+ bi a ɔde Heber atew ne ho afi Kenifo a wɔyɛ Mose ase+ Hobab mma no ho, na okosii ne ntamadan wɔ dua kɛse no ho wɔ Saananim wɔ Kedes. 12 Na nkurɔfo kɔka kyerɛɛ Sisera sɛ Abinoam ba Barak aforo kɔ Tabor Bepɔw+ so. 13 Ntɛm ara na Sisera boaboaa ne ko nteaseɛnam nyinaa ano, nteaseɛnam 900 a sekan tuatua ho* no, na ɔboaboaa asraafo a wɔka ne ho nyinaa ano fi Haroset-Hagoyim* baa Kison nsu*+ no ho. 14 Afei Debora ka kyerɛɛ Barak sɛ: “Sɔre, efisɛ ɛnnɛ na Yehowa de Sisera bɛhyɛ wo nsa. Adɛn, ɛnyɛ Yehowa na ɔredi w’anim?” Na Barak sian fii Tabor Bepɔw so, na na mmarima 10,000 di n’akyi. 15 Na Yehowa maa Sisera ne ne ko nteaseɛnam nyinaa ne n’asraafo nyinaa ani so tan wɔn,+ Barak sekan nti.* Ewiee ase no, Sisera si fii ne teaseɛnam mu guanee. 16 Barak taa ɔko nteaseɛnam ne asraafo no koduu Haroset-Hagoyim.* Enti wɔde sekan kunkum Sisera asraafo no nyinaa; ɔbaako mpo anka.+ 17 Sisera de, oguan kɔɔ Kenini Heber+ yere Yael+ ntamadan mu, efisɛ na Hasor hene Yabin+ ne Kenini Heber fifo te asomdwoe mu. 18 Na Yael pue kohyiaa Sisera, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me wura, bra, bra mu. Nsuro.” Enti ɔkɔɔ ne ntamadan no mu, na Yael de kuntu kataa no so. 19 Afei ɔka kyerɛɛ Yael sɛ: “Mepa wo kyɛw, ma me nsu kakra nnom na osukɔm de me.” Enti Yael buee kotoku* a nufusu wom ano, na ɔmaa no bi nomee,+ na ɔsan de kuntu no kataa no so. 20 Na Sisera ka kyerɛɛ Yael sɛ: “Gyina ntamadan no ano, na sɛ obi ba bebisa wo sɛ, ‘Ɔbarima bi aba ha’ a, ka kyerɛ no sɛ, ‘Daabi!’ ” 21 Afei Heber yere Yael kɔfaa dua a wɔde bɔ ntamadan mu tim fam ne hamma.* Na bere a Sisera abrɛ na wada hatee no, ɔbea no yɛɛ kodɛɛ kɔɔ ne nkyɛn, na ɔde hamma no bɔɔ dua no so wuraa n’asontɔrem, na ɔbɔɔ so ma esii fam. Enti owui.+ 22 Saa bere no nyinaa, na Barak de mmirika di Sisera akyi. Na Yael pue kohyiaa no ka kyerɛɛ no sɛ: “Bra, na mɛkyerɛ wo ɔbarima a worehwehwɛ no no.” Enti ɔne Yael kɔɔ ntamadan no mu, na ohui sɛ Sisera awu da hɔ a dua no tua n’asontɔrem! 23 Enti saa da no, Onyankopɔn brɛɛ Kaanan hene Yabin ase wɔ Israelfo anim.+ 24 Na Israelfo maa wɔn nsa yɛɛ den paa wɔ Kaanan+ hene Yabin so kosii sɛ wokum Kaanan hene Yabin.+
^ Anaa “amanaman no Haroset.”
^ Nt., “ɔwɔ.”
^ Anaa “nnade nteaseɛnam 900.”
^ Anaa “odii Israelfo no ani.”
^ Kyerɛ sɛ, na ɔka Onyankopɔn atemmu kyerɛ ɔman no.
^ Nt., “Debora abedua.”
^ Anaa “Fa wo mmarima no kogu.”
^ Anaa “Kison subon.”
^ Anaa “Barak sekan anim.”
^ Nt., “toa a wɔde aboa nhoma ayɛ.”